NextMapping | कार्य र ब्रान्डको पावरको भविष्य
भर्खरै म एक पाहुना थिए Zync एजेन्सीहरू पोडकास्ट श्रृंखला काम र ब्रान्डको शक्ति को भविष्यको बारेमा कुरा गर्दै।
पोडकास्टमा हामी (Zync टीम र म) छलफल गर्यौं किन किन ठोस ब्रान्ड हुनु अहिले पहिले भन्दा बढि महत्वपूर्ण छ।
यहाँ पोडकास्टको ट्रान्सक्रिप्ट छ - वा तपाईं यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ।
ब्रैड: सबैलाई नमस्कार र यस हप्ताको सबै ब्रान्डलाई स्वागत छ। हामी वास्तवमै सम्मानित र खुसी छौं कि हामीसँग एक विशेष अतिथि चेरिल क्रान छ, उनी आज काम र ब्रान्डको भविष्यमा पोडकास्टको लागि हामीसँग सामेल छिन्।
चेरिल क्रान कार्य विशेषज्ञ र संस्थापकको भविष्य हो NextMapping.com उनी दोस्रो संस्करण सहित नौवटा पुस्तकहरूको लेखक हुन् "नेक्स्टमैपिंग - अपेक्षित गर्नुहोस्, नेभिगेट गर्नुहोस् र कामको भविष्य सिर्जना गर्नुहोस्" र यो साथी कार्यपुस्तक हो र हामीले वास्तवमा चेरिलसँग नेक्स्टमेपिंग नाममा र नेक्स्टमेपिंगको स्थितिमा काम गरेका छौं। उनी हुन् काम प्रभावकर्ताको नम्बर एक भविष्य र एक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता परामर्शदाता। उनी फोर्ब्स, हफिंगटन पोष्ट, मेट्रो, न्यूयोर्क, सीबीएस र मा चित्रित गरिएको छ र अधिक। त्यसैले चेरिल, हामीलाई आज हामीसँग सामेल हुनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र हामी तपाईंसँग भविष्यको बारेमा कुरा गर्न पाउँदा खुसी छौं।
चेरिल: धन्यवाद ब्राड। म यहाँ छु खुशी छु।
ब्र्याड: हामी यसमा हाम फाल्न चाहान्छौं किनकि टोलीसँग तपाईंको लागि धेरै प्रश्नहरू छन् र हामी वास्तवमै के हुँदैछ भन्ने बारे तपाईंको परिप्रेक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छौं कि के हुँदैछ। त्यसोभए हामी तपाईंलाई सोच्न चाहान्छौं कि कसरी चीजहरू अहिल्यै जान्छन् र हामीले खोज्ने प्रकारका सबै चीजहरूको आधारमा सोधेर, तपाईंलाई कसरी लाग्छ आगामी केही बर्षहरूमा कार्य परिदृश्य परिवर्तन हुँदैछ?
चेरिल: सर्वप्रथम, म भन्न चाहन्छु कि हामीले १० बर्ष अघि भविष्यवाणी गरेका थियौ कि २०२० सम्ममा force०% कार्यबल दूरस्थ काम गर्ने छ।
हामीले यो महामारीको पूर्वानुमान भनेका थिएनौं किनकि यसको कारणहरू मध्ये एक हो, तर सबै संकेतहरू र सबै ढाँचा अनुसन्धान जुन हामीले पैटर्न पहिचानमा गरेका थियौं एक स्वचालित भविष्यतर्फ औंल्याउँदै थियो जहाँ हामी बढी अटोमेसन, बढी रोबोटिक्स, थप टेक्नोलोजी पाउनेछौं। नवीनता, जसको मतलब हो कि मानिसहरू टाढाबाट काम गर्न खोजिरहेका छन्। महामारी भन्दा पहिले धेरै संस्थाले टाढाको कार्य संस्कृतितिर आन्दोलन गर्न थालेका थिए। अब के भयो महामारीले यसलाई बाध्य पार्‍यो, त्यसैले हामी पनी भविष्यमा अवलोकन गर्नेछौं जुन टाढाको कार्य केन्द्रित रहन्छ।
हामी यो के साथ हेर्न गइरहेका छौं नेताहरूले आवश्यक भन्दा पहिले नेतृत्व गर्नु भन्दा उनीहरू भन्दा पहिले नेतृत्व गर्नु पर्छ। हामी धेरै धेरै आफैंले व्यवस्थित टोलीहरू हेर्न जाँदैछौं। हामी संगठनहरू अझ बढी होलाक्रेसी प्रकारको नेतृत्व र समाज-प्रकारको नेतृत्वको सहारा लिन चाहन्छौं। फेरि, यी चीजहरू हुन् जुन म मेरो पुस्तकहरूमा लेख्छु र जसको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौं। काम को भविष्य अधिक कर्मी नेतृत्व बनाम निगम नेतृत्व मा हुन गइरहेको छ। र म त्यहाँ रोकिन्छु र यसलाई अझै अन्वेषणको लागि खुला राख्न दिन्छु।
ब्र्याड: त्यसोभए जब तपाई कामदारको अगुवाईमा कुरा गर्नुहुन्छ, के तपाईलाई लाग्छ के त्यस्तो केहि तत्वहरू छन् जुन काम गर्ने कर्पोरेसनको नेतृत्वमा काम गर्ने बित्तिकै बदलिन्छ?
चेरिल: सबै भन्दा पहिले हामी gig अर्थव्यवस्था मा वृद्धि देख्न जाँदैछन्। हामी अझ धेरै कामदारहरू भनेको देख्दैछौं, तपाईंलाई के हो थाहा छ, म वास्तवमा एउटा निगमको लागि काम गर्न चाहन्न। म बहु उद्योग अनुभव चाहन्छु। त्यसैले म ठेकेदारको रूपमा धेरै संगठनहरूको लागि काम गर्न जाँदैछु, एक स्वतन्त्रकर्ताको रूपमा, र त्यस्तो तरिकामा काम गर्दैछु जसले उनीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान आधार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ तर तिनीहरूको भविष्यका विकल्पहरू पनि बढाउँदछ। त्यसोभए मजदुरहरूले नेतृत्व गरेको अर्थ यो पनि हो कि हामी हालको स्थितिसँगै छौं र हो, म महामारीको बेलामा अमेरिका र क्यानडामा बेरोजगारीको संख्याबारे धेरै सचेत छु, र त्यो हामीले सामना गरिरहेको छैन कि अझै देखिनै रहेको छ। एक कामदारको अभाव जब चीजहरू अर्को सामान्यमा फर्कन्छ, त्यसैले यो के थियो त्यसमा फर्कने छैन। यो अर्को सामान्यमा जान्छ र त्यो अर्को सामान्य सामान्य वातावरण हो जहाँ कामदारहरूले निर्णय गर्न लागेका छन् कति र कसरी उनीहरू काम गर्न चाहन्छन्।
श्रमिकहरूले टाढा टाढाको रूपमा कामको वर्णनको रूपमा कामको माग गर्दछ। मजदुरहरू कसरी उनीहरू काम गर्न चाहन्छन् भनेर हुकुम दिन जाँदैछन् र संगठनहरूले अझै पनि प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू र संगठनहरू कामदारको मागको पूर्ति गर्न लागेका छन् र उनीहरू कसरी काम गर्न चाहन्छन् र यो केवल एक नयाँ वास्तविकता हो जुन संगठनहरू भएको छ यस भन्दा पहिले अनुकूलन। तर अब वास्तवमै हेर्दै कसरी हामी एक कर्पोरेट केन्द्रित वातावरण बनाम एक कामदार केन्द्रित वातावरण गरेर उत्तम प्रतिभा आकर्षित गर्दछौं।
जेरेमी: चेरिल, तपाईलाई के लाग्छ ब्रांड र मार्केटरहरु लाई यो नयाँ वास्तविकता बारे जान्न को लागी महत्वपूर्ण हुन्छ?
चेरिल: मलाई लाग्छ यसले ब्रान्ड छलफललाई बदल्छ। म धेरै पटक सोच्छु जब हामी ब्रान्डको पाठ्यक्रममा हेर्छौं र, र हामी तपाईंहरूसँग काम गर्दा, हामी जान्दछौं कि तपाईंको प्रक्रिया साँच्चिकै गहिराईमा छ र तपाईं सबै कोणहरूमा हेर्नुहुन्छ, तपाईं क्राउडसोर्सिंगलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईंको ग्राहक आधार र ती सबै चीजहरू जुन तिमी मान्छेहरु साँच्चिकै राम्रो गर्छौ।
मलाई लाग्छ कि ब्रान्डसँग अब संगठनको मूल्य प्रदर्शन गर्ने सन्देश छ र श्रमिकहरूलाई देखाउनुहोस् कि ब्रान्ड एक श्रमिक नेतृत्वको संगठन हो। ब्रान्डलाई नयाँ कार्यकर्ता मनोवृत्तिको साथ लाइन अप गर्न आवश्यक छ। ब्रान्डसँग टाढाको नीति नीति, नैतिक कामदार प्रक्रियाहरू हुनुपर्दछ र ग्राहकको अनुभवका साथै वर्कर्स अनुभवको साथ ब्रान्डको वचन प al्क्तिबद्ध गर्न आवश्यक छ।
ब्रैड: र के तपाई भन्न सक्नुहुन्छ, चेरिल, कामदारहरूले चीजहरू साँच्चिकै सत्यवादी र इमान्दार र सीधा हुने आशा गरिरहेका छन्।
चेरिल: हो, नक्कली समाचारको अधिकताका साथ कि हामीसँग बमबारी गरिएको छ मानिसहरू पign्क्तिबद्धता र अखण्डताप्रति संवेदनशील छन्, जुन प्रामाणिकतामा तल आउँदछ। त्यसोभए उनीहरू ब्राण्डमा खोज्दैछन्। तिनीहरू कम्पनीहरूको लागि खोजी गर्दैछन् जुन ब्रान्डमा बाँच्दै छन्, ब्रान्ड हो, ब्रान्ड वितरण गर्दै। नेक्स्टमैपिंगमा एक चीज हाम्रो लागि साँच्चै राम्रो काम गर्‍यो एकपटक जब हामी तपाईंलाई मान्छेहरूसँग ब्रान्ड गर्‍यौं भन्ने तथ्य यो थियो कि ब्रान्ड पूर्ण रूपमा हाम्रो बारे मा संरेखित थियो, जसले मानिसहरूलाई अर्कोमा पुग्न मद्दत गरिरहेको थियो। त्यसैले यदि ब्रान्ड प .्क्तिबद्ध छैन, मान्छे त्यहाँ छैनन्।
मानिससँग बिजय प्राप्त गर्न तपाईंसँग अब समय छैन, ब्रान्डमा द्रुत र प्रामाणिक रूपमा अवतरण गर्नुपर्दछ ताकि व्यक्तिहरू तत्कालै प्राप्त गर्न सक्दछन् र उनीहरूले ब्रान्डबाटै मूल्य प्रस्ताव प्राप्त गर्दछन्।
Gabi: संगठन स्तर मा बोल्दै, हामी कसरी काम गर्छौं को संरचना, फरक घण्टा संग परिवर्तन हुनेछ, अधिक टाढा टाढा, जस्तै तपाईंले भन्नुभएको वा अरू केहि?
चेरिल: ओह, माथिका सबै। हो मलाई अर्को दिन रियल इस्टेटको वरिपरि प्रश्न सोधिएको थियो। कर्पोरेट रियल इस्टेटको लागि पोस्ट महामारी वास्तविकता के मतलब हो? ठीक छ, धेरै संगठनहरू, पूर्व महामारी, हामी पहिले देखि नै हेरिरहेका छौं टाढाको कार्यस्थल जस्तो देखिन्छ कस्तो? तपाईंलाई थाहा छ, कार्यालयमा काम गर्ने कामदारहरूको प्रतिशत के हो? टाढाबाट काम गर्ने प्रतिशत के हो? हामी त्यो कसरी गर्छौं? खैर, यसको लागि पूर्ण रिमोट वर्क नीति चाहिन्छ, जुन धेरै कम्पनीहरूले हेरिरहेका छन्। त्यसोभए काम भइरहेको छ, मलाई लाग्छ ला कार्टेजको बनाममा त्यहाँ काम गर्ने एक मात्र तरीका छ। त्यसोभए म भविष्यमा विश्वास गर्दछु तपाई पूर्ण समय रिमोटको काम गर्न चाहानुहुन्छ वा के तपाईं अफिसमा काम गर्न चाहानुहुन्छ remote०% टाढा समय, of०% समय तपाई त्यस्तो प्रकारको कामका लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ?
हामी व्यक्तित्व र कार्य शैली र कार्यको प्रकारको वरिपरि ठूलो संरेखण हेर्न गइरहेका छौं जुन तिनीहरूलाई उत्तम रूपमा मिल्दछ। यस समयको लागि चाखलाग्दो किस्सा यो हो कि महामारी महामारीको समयमा इन्ट्रोभर्टहरू फस्टाउँदैछ। किन? किनभने सामान्यतया उनीहरू एक्लै काम गर्छन्। यो एक्स्ट्रोभर्ट्स हो जुन संघर्ष गरिरहेका छन् किनकि ती व्यक्ति एक व्यक्तिमा अफिसको वातावरणमा क्रियाकलापको घारमा फस्छन्, पहिले नै हामी देख्दैछौं, तपाईलाई थाहा छ, सजिलैसँग पछि पोस्ट महामारीको रूपमा, हामी संस्थालाई हेर्दैछौं अफिसमा कम संख्या। र मलाई लाग्छ कि यो प्रवृत्ति जारी रहनेछ। मलाई लाग्छ हामी कम तातो निकाय र कार्यालयहरु र कार्यालय र रोटि teams टोलीका साथ रिमोटको यो संकर धेरै देख्न लाग्यौं। र मँ लाग्छ कि अफिसको प्रयोग अधिक हुन्छ, WeWork प्रकारको संरचना। मानिसहरुको समूहको पोड जो परियोजनाहरुका लागि आउँछन्। तिनीहरू अझै पनी काम गर्नेछन्, तपाइँलाई थाँहा छ, फेरि संकर रिमोट र अफिसमा। र म अफिसहरू पनि देख्छु, कर्पोरेट घर जग्गा सम्पत्ति एरबिएनबीले जस्तै निवासीहरूलाई हेरिरहेको। हामी कर्पोरेटका लागि एयरबएनबी हेर्न गइरहेका छौं जहाँ तपाई हाल कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्दा बाहिर ठाउँको उपयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। त्यसैले धेरै परिवर्तनहरू आउँदैछन् र धेरै चाँडै।
क्रिश्चियनः तपाईले कसरी यो व्यवसायलाई असर गर्ने बारेमा कुरा गर्नुभयो। म सोचिरहेको थिएँ कि महामारीले सरकारहरूले वास्तवमा आफैंलाई सञ्चालन गर्ने तरीका बदल्छ?
चेरिल: सरकार, म विश्वास गर्दछु कामदारको नेतृत्वमा रहेको कर्पोरेट जस्तो, हामी नागरिकको नेतृत्वमा रहेको सरकार देख्नेछौं र हामी सबै त्यहाँ जाँदै छौं। मेरो मतलब, क्यानाडामा हामी धेरै भाग्यशाली छौं किनकि हामी साँचो लोकतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं, तर हामी सामान्यतया अझ बढी देख्छौं जुन हामीले देखेका थियौं, सानो पैसाका लागि पैसा खर्च गरिएको र तपाईंलाई थाहा छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरकारी रोजगार दृष्टिकोणबाट आवश्यक सेवाहरू।
एक उद्योग सरकार को रूप मा काम को भविष्य लाई समात्न धेरै काम गर्न छ।
र म भन्न सक्दछु किनकि ती मेरा ग्राहकहरू हुन् र मेरा केही ग्राहकहरू हुन्।
र यसको मतलब के हो भन्ने कुरा धेरै परम्परागत उद्योगहरू जस्तै सरकारी वित्त, बीमा हो, तिनीहरू कत्ति कडा थिए कि कसरी उनीहरूले कार्यस्थलको संरचना गरेका छन् जुन उनीहरूको टाढाको कामको वास्तविकतामा छाँटकाँट भएको थियो, केको , भर्खर के हुनेवाला थियो, तर उनीहरूलाई आकर्षण र प्रतिभा वा व्यक्ति कायम राख्न समस्या भइरहेको छ किनभने उनीहरू यति प्रतिबन्धित छन् कि तपाईं उनीहरूको लागि कसरी काम गर्नुहुन्छ र तिनीहरूसँग।
त्यसैले मैले वर्षौंदेखि भनेको छु, दुई स्थान जहाँ यो सबैभन्दा दर्दनाक हुन गइरहेको छ रोजगारदाताहरू सरकार र यूनियनहरू हुने छ। र यसको कारण संरचना संरचना लचिलो र अनुकूल छैन जहाँ हामी कामको भविष्यको लागि जाँदैछौं। यसको मतलब यो होइन कि तपाईं संस्थाहरू आधुनिकीकरण गर्न सक्नुहुन्न, तर त्यहाँ धेरै नेतृत्वको खाँचो छ जुन उनीहरूलाई उठाउनुपर्दछ र उनीहरूले यस टाढाको काम वास्तविकतालाई पूरा गर्न पाउन्, तर लचिलो काम वास्तविकता पनि पूरा गर्छन्, गिग इकॉनोमीमीटि वास्तविकतालाई पूरा गर्दछन्।
ब्र्याड: तपाईले सुन्न लाग्नु भएको कुरा भनेको यो हो कि जहाँ भन्दा पहिले तपाईलाई थाहा छ कि यो व्यवसाय थियो वा सरकारहरू कसरी कामहरू गर्नुपर्‍यो भनेर धेरै प्रिस्क्रिपेटिभ थिए। अहिले के भइरहेको छ कि नागरिकहरू, मानिसहरू, कामदारहरूले दुबै सरकार र व्यवसायलाई भनिरहेका छन्, यो हामी आशा गर्छौं र यो हामी चाहन्छौं। र एक ब्रान्ड परिप्रेक्ष्यमा, ब्रान्ड पावर परिवर्तन हुँदैछ, तपाईंलाई थाहा छ, सरकारहरू र नियोक्ताहरू तल जनतामा। तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यो एक उचित मूल्यांकन हो?
चेरिल: मँ भन्छु त्यो एकदमै सहि छ। जसरी कर्पोरेसनहरू कामदारको अगुवाईमा हो, सरकार नागरिकको नेतृत्वमा रहेको छ वा जहाँ हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं, उदाहरणका लागि, क्यानाडामा हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं कि हामी एउटा प्रजातन्त्र हौं र हामी धेरै भाग्यशाली छौं हाम्रो स्वास्थ्य सेवा छ , तपाईंलाई थाहा छ, हामी हौं, यो महामारीको बखत हामीले एक देशको रूपमा सञ्चालन गरेको व्यवहार अद्भुत हुँदै आएको महसुस गर्छु। त्यसैले हामी धेरै, धेरै भाग्यशाली पनि एक सरकारी नियोक्ताको रूपमा, यदि तपाईंको ब्रान्ड प्रतिस्पर्धी ब्रान्डहरूसँग मेल खाँदैन भने। सरकार प्रतिस्पर्धीहरू अब अमेजन र गुगल र यी सबै टेक फर्महरू हुन् र यदि म हजारौं वर्षदेखि मेरा सबै विकल्पहरू हेर्दै छु र त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् यदि हामी यस महामारीमा छौं, त्यहाँ pred करोड global० लाख विश्वव्यापी कामदार अभाव छ वर्ष २०32०।
सरकारसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर हेर्नु आवश्यक छ अमेजन, को Googles, सुरुआत दुवै लचिलोपनमा तर संरचनामा पनि ताकि हामी सेवाहरू प्रदान गर्न सक्नेछौं जुन हामीले प्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ।
कार्यस्थल जनतामा फोकसको केन्द्र बन्न गएको छ र मानिसहरू के चाहन्छन् भन्नेमा जान्छन् र परम्परागत व्यापारिक मानसिकता बनाम बनाउनु पर्छ कि उनीहरूले हामीलाई अनुकूलन गर्न सक्दछन् किनकि यो हामी कसरी काम गर्छौं।
सरकारले सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू भनेको व्यक्तिको आवश्यकता के हो र सम्भावित समाधान के के हुन्?
नागरिक सेवाहरूको सन्दर्भमा एक व्यक्ति, च्याट बोट, एआई वा रोबोट द्वारा राम्रो सेवा प्रदान गरिन्छ? त्यो कामको प्रश्नको नयाँ भविष्य हो। काम के हो, आवश्यकता के हो र सबैभन्दा उत्तम समाधान के हो? तिनीहरू वास्तवमै ड्राइभि That's्ग गर्दै छन् जहाँ उनीहरू जाँदै छन्।
गाबी: मानव जडान र अन्तर्क्रियाले कर्मचारीको रूपमा, उपभोक्ताको रूपमा, सामान्य रूपमा समाजको रूपमा कस्तो भूमिका खेल्नेछ?
चेरिल: त्यहाँ डर मोनर्सहरू छन् कि रहनेछ, रोबोटहरू आउँदैछन् र उनीहरूले सबैको काम लिइरहेका छन् र तपाईंलाई अब व्यक्ति चाहिने छैन। हामीले पत्ता लगाएका अनुसन्धानहरू त्यो सत्य होइन। वास्तवमा, विश्व आर्थिक फोरमले भनेको छ कि मान्छे पहिले भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। जे होस्, त्यहाँ रोबोटको वरिपरि कथा आउन सक्ने कारण यो हो कि यो सीपको स्तरको डरले भविष्यको वास्तविकतासँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यसोभए तपाईसँग भएको एउटा समूह हो जुन हामीले मानिसहरूलाई दिने सेवाहरू बृद्धि गर्न टेक्नोलोजी लाभ लिनको लागि अप-कुशल र पुनः अनुसूचित हुन आवश्यक छ।
त्यसोभए वास्तवमै यो मानव जीवनमा पहिलेभन्दा बढी मानव छ। यसको मतलब हामीले ब्रान्डको रूपमा त्यस लेन्सको माध्यमबाट हेर्नुपर्दछ यसले कसरी मानवतालाई मद्दत गर्दछ?
हामीले सोध्नु पर्छ, यसले मानिसहरूलाई कसरी मद्दत गर्दछ?
भविष्य मुनाफाका साथ पहिलो व्यक्तिहरूको बारेमा हो। मलाई लाग्छ यदि केहि छैन भने, यो महामारीले हामी सबैलाई जान बाध्य पार्छ, ठीक छ, एक सेकेन्ड पर्खनुहोस्, वातावरणमा विराम दिइरहेका हामी सबैको प्रभावलाई हेर्नुहोस् वा हामी कसरी थप दिगो भविष्य निर्माण गर्दछौं र के हाम्रो ब्रान्डले दिगोतालाई पालन गर्छ?
र हामीले यो पनि पत्ता लगायौं कि व्यक्तिहरूले उनीहरूको जीवनका वास्तविकताहरूसँग व्यवहार गर्ने सम्बन्धमा बढी फेला पारेका छन्। त्यसोभए हामी कसरी मानिसका व्यक्तिगत परिस्थितिहरूमा बढी अनुकम्पापूर्ण नेता हुन सक्दछौं?
स्वचालन र रोबोट गरिएको भविष्य वास्तवमा हामीलाई अझ राम्रो मान्छे हुन बाध्य पार्दैछ र मानवहरू आवश्यक हुन जाँदैछन्।
र हाम्रो सीप विकास दुई चीजको वरिपरि हुनु पर्छ।
नम्बर एक, हो हामीले हाम्रो टेक्नोलोजी अनुकूलन वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
नम्बर दुई, हामी राम्रो मानिस हुनुपर्छ।
हामीले आफ्नो समानुभूति प्राप्त गर्न सकेका छौं, हामीले आफ्नो भावनात्मक बौद्धिक जानकारी पाएका छौं। मसँग कसरी काम गर्ने भन्ने बारे हाम्रो बुझाइ पाएको छु। र मलाई लाग्छ कि यो भविष्यको लागि रोमाञ्चक अवसर हो।
ब्र्याड: यो कुरा तपाईंलाई चाखलाग्दो छ कि तपाईं त्यो भन्नु हुन्छ किनभने मलाई लाग्छ कि ब्राण्डरहरू र बजारहरू जहिले पनि भन्ने गर्छन्, ठीक छ, हामी सधैं उपभोक्ताहरूको कुरा सुन्दछौं र तिनीहरू त्यो मूल्या in्कनमा सही हुनेछन् र उनीहरू सुन्दै आएका छन्। तर मलाई लाग्छ उनीहरूले कसरी सुन्नु पर्ने हुन्छ भविष्यमा फरक पर्न सक्छ। त्यसोभए जहाँ उनीहरू कसरी सुन्न अघि व्यक्तिहरू किन किन्थे र किन किन उनीहरू खरीद गर्छन्, मलाई लाग्छ कि सुन्नु भनेको के हो किन उनीहरूलाई किनबेच गर्न प्रेरित गर्दछ वा के कारण उनीहरूलाई ब्रान्डको साथ भाग लिनको लागि प्रेरित गर्दछ वा, वा एक ब्राण्ड छनौट गर्नुहोस्। त्यसोभए यो, यो प्राय जसो गहिरो तहमा जान र सुन्नु जस्तै हो। तपाईले राम्रो मानिस भएको बारेमा कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ हामी अझ राम्रा ब्राण्डर र बजार पनि हुनुपर्दछ। हामीले फरक तरिकाले सुन्नु पर्छ। हामीले हाम्रा कम अपेक्षाहरूका साथ सुन्नु पर्छ, तपाईंलाई थाहा छ किनकि त्यहाँ दुई प्रकारका सुनुवाई छन्। तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ र व्यक्ति को लागी प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले पहिल्यै सोचिरहनुभएको थियो। वा तपाईं खाली खाली दिमागमा जान सक्नुहुन्छ र सुन्न सक्नुहुन्छ र सुन्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिले के भनिरहेको छ। र मलाई लाग्छ कि त्यो बदलाव हो जुन हामीले अझ राम्रो ब्रान्डर र बजार बन्ने बानी बन्नु पर्छ।
चेरिल: त्यहाँ के म सतह सुन्न कल गर्छु। जहाँ तपाईं यो सुन्नुहुन्छ कि यदि तपाईंको दृष्टिकोण पोख्त भइरहेको छ र त्यसपछि सहज ज्ञानपूर्वक सुन्न सकिन्छ र यसको लागि मनको विशालता चाहिन्छ जहाँ कुनै पूर्वानुमान धारणा हुँदैन र ती अचम्मका तत्वहरू खोज्दैछ जुन त्यस व्यक्तिको कहिल्यै हुँदैन, अर्को शब्दहरु, यो उनीहरुको लागी सचेत छैन, तर ब्रान्डिंग विज्ञहरु द्वारा यसलाई लिईन्छ।
मैले यो अनुभव गरें कि तपाईं र तपाईंको टीमसँग तपाई साथीहरू धेरै राम्रो हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सतह को स्तर को तल पढ्न को लागी र ब्रान्ड को प्रतिज्ञा को मानवीय पूर्ति को साथ पूरा गर्न को लागी सक्षम हो। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ एक छ, त्यहाँ सुन्ने विभिन्न स्तरहरू छन्। मलाई लाग्छ कि हामी अब त्यो गहिरो सहज ज्ञान युगको युगमा प्रवेश गर्दैछौं जहाँ यो केन्द्रित छ जहाँ मानव तत्व के हो, जहाँ ब्रान्डले मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न गइरहेको छ।
जेरेमी: तपाईलाई कसरी लाग्छ ब्यापार र ब्रान्डहरू र स्पष्टसँग सरकार भविष्यमा फस्टाउन सक्छ किनकि यी सबै थप लचिलोपनको साथ, मेरो मतलब त्यहाँ त्यहाँ खर्च भएको छ, हैन?
चेरिल: मलाई लाग्छ यो हामीमा के गर्ने तल झर्छ NextMapping, जुन उसको वा उनको नेतृत्व क्षमता विस्तार गर्न नेताहरूलाई मद्दत गर्नु हो। यसको साथ सुरू गर्न नयाँ अनुकूलनीय नेतृत्व मानसिकता चाहिन्छ।
महामारीले बाध्य पारेको अनुभूति हो कि हामी सबैलाई अधिक अनुकूलनीय बनाउनुपर्दछ यो शक्तिको अवरोधले व्यवसायलाई ध्यान दिएको छ, जुन वास्तवमै चाखलाग्दो छ किनकि पूर्व महामारीको कारण तपाईले आफु जस्तो विशेषज्ञहरूको झुण्ड पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि आकाश झर्दै छ। र सबै जना जाँदैछ, हो, हो, हामी बस गरिरहन्छौं हामीले सही गरिरहेछौं?
यसको सट्टा हामीसँग अब वास्तविक जीवन ग्लोवल अवरोध छ जुन सबैको पीडादायी बिन्दुहरू महसुस गरिरहेको छ।
त्यसोभए तपाईसँग त्यो परिवर्तनमा दुई विकल्पहरू छन् र त्यो अवरोध। तपाईं दुखाइलाई वेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ र योजनाबद्धको रूपमा जारी राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईं महामारीको रूपमा गर्नुभयो, र यो एक विकल्प हो। र त्यो छनौटले तपाईंलाई भविष्यको रूपमा व्यवसायको रूपमा गैर प्रासंगिक हुनतर्फ डोर्‍याउन सक्छ। बी, तपाईं अधिग्रहण वा अधिग्रहणको लागि खुला हुनुपर्दछ किनकि जो कोही छिटो वा अनुकूलन गर्न इच्छुक छ त्यो खेलको अगाडि हुनेछ। विगतमा भएको दुखाइको प्रतिक्रियामा,
म एक रणनीतिक विज्ञको रूपमा भन्ने छु कि तर्क हुनेछ, राम्रो यो धेरै पैसा खर्च लाग्नेछ यो परिवर्तन गर्न को लागी।
र मलाई लाग्छ कि नयाँ तर्क भनेको परिवर्तन नगर्ने लागत र डाटा र त्यसको वैधता र त्यसका बारे हो, किनकि मेरो अनुभवमा धेरै नेताहरू अत्यन्त कठोर र अहंकारको वरिपरि तिनीहरूको स्थितिमा स्थिर हुन्छन्।
हाम्रो टीम भित्र २० बर्ष भन्दा बढी बर्षको अनुभवको साथ, हामी मध्ये कसैलाई पनि अहिले के हुँदैछ भनेर कुनै अनुभव छैन। यद्यपि हामीसँग के छ चपलता, लचिलोपन र ईगो राख्नको लागि इच्छुकतालाई सहयोग पुर्‍याउने र मान थप्न को लागी तरिकाहरू खोज्न।
नेताहरूलाई अगाडि बढ्ने कुरा भनेको इच्छुकता हो, मलाई थाहा छैन, तर हामीसँग एउटा टिम छ जुन साँच्चिकै चतुर मानिसहरू छन् र हामी सँगसँगै हामी आफ्नो दिमाग खोल्न जाँदैछौं, हामी भीडको स्रोतमा जाँदैछौं, हामी हाम्रो नेतृत्व सीपहरू माथि जाँदैछौं ता कि हामी थप अनुकूलनीय, लचिलो कि हामी यसमा ल्याउन सक्छौं, कि हामी मोरफ गर्न सक्छौं, हामी के भइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्न सक्छौं र रणनीतिक हिसाबले परिवर्तन नगर्ने लागतमा हाम्रो धेरै व्यवहार्यता हो भविष्य
ब्र्याड: के म सुन्दै छु कि व्यक्तिहरूले वास्तवमा बुझेका छन् कि तिनीहरू केवल अरूलाई आफैं लचिलो नभई सबै लचिलो हुनको लागि सोध्न सक्दैनन्। सही?
चेरिल: कुनै प्रश्न छैन। त्यसोभए एउटा कुरा म साँच्चिकै स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले कुरा गरिरहेको छैन जब हामी कामदारको नेतृत्वमा रहेको अर्थव्यवस्था वा श्रमिकको नेतृत्वमा हुने व्यवसायको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी वास्तवमै आपसी उत्तरदायित्वको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। त्यसोभए कोही पनि जुन कि एक जना कामदारको रूपमा बाँच्न, तपाई निश्चित रूपमा बाँच्न जाँदै हुनुहुन्न, ठीक छ, मैले सबै कार्डहरू समातेको छु, श्रीमान् रोजगारदाता, र अब तपाईले जे गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई भनेको छु। त्यो मैले भनेको होइन। म के भन्दै छु त्यहाँ एक आपसी उत्तरदायित्व छ। त्यसोभए कामदारहरू जुन आफ्नो रोजगारदातालाई उनीहरूको लागि त्यसो गर्न पर्खेर प्रतीक्षा नगरी अपस्किल र पुन: कुट्न इच्छुक छन्।
तपाईलाई थाहा छ, अर्को शब्दमा, त्यो आजीवन सीखो हो र भनिरहेको छ, "म मेरो ज्ञान र मेरो शिक्षणको भार लिन जान्छु ताकि म सबैभन्दा बढी अपनाउन योग्य र अधिक लचिलो हुन सक्छु र कम्पनी पिभोटलाई मद्दत गर्न सक्छु"।
श्रमिक र रोजगारदाता बीच पारस्परिक जवाफदेहिता हुनु आवश्यक छ।
चेरिल: ग्राहकहरू र सहयोगीहरू मैले भनेको थिएँ कि त्यहाँ अहिले एउटा वेक अप कल भइरहेको छ र त्यो वेक अप कल एकदमै समान छ १ 1980 s० को दशकमा जब ब्याज दर २२% थियो र मानिसहरूले आफ्नो घरहरू गुमाइरहेका थिए।
र नब्बेको दशकमा जब हामीसँग युद्ध भयो र २०० 2008 को मन्दी।
यी अवरोधहरू वेक अप कलहरू हुन्, र तिनीहरू यस्ता प्रश्नहरू निम्त्याउँदछन्, मैले के सिक्नु पर्छ? म कसरी सहयोग पुर्‍याउँछु? म कसरी सहयोग गर्दछु? म कसरी आफ्नो सीप अधिकतम गर्न सक्छु? म कसरी अन्य मानिसहरूलाई सफल हुन मद्दत गर्दछु?
ती प्रश्नहरू हुन् जुन व्यक्तिहरूको हैसियतमा, यदि हामीले आफैलाई सोध्छौं भने हामीसँग आजीवन जागिर स्थिरता वा कार्य स्थिरता हुनेछ। तर यदि तपाईं पछाडि बसिरहनुभएको छ र तपाईं जानुहुन्छ, राम्रो, तपाईंलाई थाहा छ, सरकारले मेरो हेरचाह गर्नेछ। ठ्याक्कै त्यो मात्र शुद्ध पागलपन हो। त्यो तपाईंको आफ्नै भविष्य सिर्जना गर्न भूमिका को जिम्मेवारी लिने छैन।
भविष्य निर्माण गर्नु हामी सबैको हातमा रहेको कुरा हो।
त्यसोभए त्यहाँ अझै धेरै अवसरहरू छन् यद्यपि हामी इतिहासको कठिन समय र गाह्रो अवस्थामा पार गर्दैछौं, विगतमा हामीले सामना गरेका अन्य कठिन समयहरू भन्दा बिलकुलै फरक छौं, तर हामीले अझै पनि यस्तै प्रकारले गहिरो तल खन्नुपर्दछ। हामीसँग भूतपूर्वमा रहेका त्यहि क्षेत्रहरू आफैंबाट प्राप्त गर्नका निम्ति। तर यसबाट बाहिर आउँदैछ, त्यो क्षमता फस्टाउन र बाँच्न मात्र होइन मान्छेहरूका लागि महत्वपूर्ण हुन गइरहेको छ, जो पजलको यस अर्को टुक्रामा राम्रो गर्छन। र मलाई लाग्छ कि यो वास्तवमै शक्तिशाली छ जब तपाईं कामको भविष्यको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको सबै मिलाउनुहुन्छ जुन ब्रान्डरहरू र मार्केटरहरूले सबै समर्थन गर्न के गर्नुपर्दछ।
ब्रैड: ठ्याक्कै सहि छ। सन्देश संरेखित हुनु पर्छ। स्थिति पigned्क्तिबद्ध हुनु पर्छ। तपाईं यी सबै व्यक्तिहरू यी परिस्थितिहरूमा काम गर्ने वा यी सरकारहरूको अधीनमा बस्न सक्नुहुन्न। र त्यसपछि मार्केटिंग र ब्रान्डि exactly उस्तै उस्तै रहन्छ। यो पहिले जस्तो थियो। त्यसोभए यो वास्तवमै हामी सबैको बारेमा हो जुन पूर्ण रूपमा सबैलाई हेर्नु हो र बुझ्नु पर्छ कि फलफूल हुनको लागि र ती चीजहरू गर्न हामीले तपाईले भनेको तीनवटा कुरा गर्नु पर्छ। हामीसंग राम्रो नेतृत्व हुनु पर्छ। हामी जो नेताहरू हौं, हामी अझ राम्रा नेता बन्नुपर्दछ र हामीले हाम्रा नेताहरूबाट अझ बढी आशा गर्नुपर्दछ यदि हामी नेतृत्वको स्थितिमा छैनौं भने हामी अझ राम्रो ब्रान्डर र बजार बन्नुपर्दछ र हाम्रो काममा अझ राम्रो हुनुपर्दछ र अधिक जवाफदेही हुन र जवाफदेही आशा गर्न को लागी अधिक इच्छुक। र अन्तमा, तपाइँको कुरा गर्न को लागी, हामी राम्रो मानिस हुनु पर्छ।
हामी केवल राम्रो मान्छे हुनु पर्छ। र मलाई लाग्छ कि आखिरमा यो के हो तल आउँछ। र यो हामी यी सबैबाट लिन सक्छौं। चेरिल, तपाईको समयको लागि धेरै धेरै धन्यबाद। तपाईंलाई थाहा छ, हामी यहाँ छौं खुशी छौं। हामी कामको भविष्यको बारेमा र ब्रान्डको भविष्यको बारेमा कुरा गर्न पाउँदा खुसी छौं र यी दुई चीजहरूलाई एकसाथ मिलाएर। त्यसोभए हामीसँग सामेल हुनुभएकोमा धन्यवाद। हामी यसको कदर गर्दछौं। धन्यवाद। त्यसोभए सबैलाई, यो हप्ताको लागि ब्राण्ड हो।